Bookmaker သည်ထိုအချိန်မှ စ၍ အင်တာနက်အခြေပြုသည့်အလောင်းအစားတစ်ခုဖြစ်သည် 1996 ထိုအချိန်ကတည်းကအလောင်းအစားများကိုထောက်ခံခဲ့သည်. လူများသည်ဘတ်စကတ်ဘောအပါအ ၀ င်အမျိုးမျိုးသောလှုပ်ရှားမှုဘေ့စ်ဘောအားလောင်းကစားနိုင်သည်, ဟော်ကီ, တိုက်ခိုက်ရေးစတိုင်များ, မြင်းပြိုင်ပွဲ, နှင့်အများကြီးပို. ဖြည့်စွက်ကာ, ကစားသမားများသည် Bookmaker.com ဖဲချပ်areaရိယာအတွင်းလောင်းကစားကိုကစားနိုင်သည်. လောင်းကစားနေသောသင်၏လိုအပ်ချက်များမည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေ, Bookmaker.com သည်သင်ဖုံးထားကြောင်းစိတ်ချစွာရနိုင်သည်.
Bookmaker.eu တွင်ရောင်စုံသောအတိတ်ပါဝင်သည်. အချိန်လုပ်နေတာကိုအနာတက်တဲ့သူတွေအများကြီးနဲ့ဖန်တီးခဲ့တယ် (ဒါပေမယ့်သူတို့ကအခုဆိုရင်အထက် - ဘုတ်အဖွဲ့ပံ့ပိုးပေးဖြစ်ကြသည်), ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သည် ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအလယ်ပိုင်းတွင်စတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့သောတရားမ ၀ င်ကမ်းလွန်အားကစားလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည့် အချိန်မှစ၍ အဓိကပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းများစွာကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။.
အချိန်အတော်ကြာအွန်လိုင်းပေါ်တွင်ရှိခဲ့သောကစားသမားများက Bookmaker.eu ကို၎င်း၏အမည်ဖြင့်မှတ်ထားနိုင်သည်၊. အဲဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းသင့်လျော်သောအခက်အခဲအတွက် mired တယ်, နောက်ဆုံးတွင်ကော့စတာရီကာတွင်ဂိမ်းလိုင်စင်ကို အသုံးပြု၍ ဌာနချုပ်ထားရှိခြင်းကြောင့်ဤသည်သည်အတော်အတန်တရားဝင်သည်.
Bookmaker.eu သည်အပန်းဖြေခြင်းသည်လောင်းကစားရုံလုပ်နေခြင်းဖြစ်သည်, နှင့်ဖဲချေးလောင်းများ 1980 ကြောင်းစဉ်းစား, ၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင်အွန်လိုင်းပေါ်မှဂိမ်းများကိုတွေ့ရသည်, ကြောင်းစက်မှုလုပ်ငန်းစန်းပွစတင်ခဲ့သည်အဖြစ်. သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်တွင်မကောင်းသောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း (သို့) ဖောက်သည်များ၏မကျေနပ်မှုများလုံးဝမပါ ၀ င်သောနာမည်ကြီးတစ်ခုပါ ၀ င်သည်, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိလူအများစုအတွက်လောင်းကစားဖြေရှင်းနည်းများစွာရှိသည်, အမေရိကန်အခြေစိုက်လောင်းကြေးအပါအ ၀ င်.
BookMaker သည်ငွေသွင်းရန်အလွယ်ဆုံး Sportsbooks တစ်ခုဖြစ်သည်. အပေးအယူများလျင်မြန်စွာလုပ်ငန်းများ၌ခံရလေ့ရှိပါတယ်, နှင့်သင်၏ဘဏ်အကောင့်ကိုဘယ်လိုရန်ပုံငွေတစ်ခုရွေးချယ်မှုရှိပါတယ်.
ငွေသွင်းကတ်ထည့်ရန်ခွင့်ပြုချက်ပုံစံကိုဖြည့်ရန်လိုသည်. ဒါဟာတော်တော်လေးပုံမှန်ပါပဲ။ ဖြည့်ဖို့အချိန်မကြာပါဘူး, တစ် ဦး Imprint ကဒ်၏သင်ကတီထွင်သင့်ပါတယ်သော်လည်း (လမ်းညွှန်ချက်များပေးထားသည်).
BookMaker ကလက်ခံပါတယ် 60 crypto ငွေကြေးအများအပြားအမျိုးအစားများ, နှင့်အဆက်မပြတ်ပိုပြီးအပါအဝင်ခံရလေ့ရှိပါတယ်.
Bitcoin နှင့်စတင်ခြင်းသည်အလွန်လွယ်ကူကြောင်းကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့သည်. ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်တွင်သင် USD ဘယ်လောက်သွင်းလိုသည်ကိုရိုးရိုးလေးသာလိုအပ်သည်, ဒီဟာကသင်အရည်အချင်းပြည့်မီကြောင်းအမျိုးမျိုးသောအပိုဆုကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်, သင်၏ပြီးနောက်သိုက်ပို့ရန်ပိုက်ဆံအိတ်ပစ်မှတ်ကိုပေးသည်. ပစ်မှတ်ကိုသာကူးယူပါ, လိပ်စာ paste ရန်သင့် Bitcoin ပိုက်ဆံအိတ်သို့သွားပါ, ဒီအမှန်တကယ်များအတွက်အမှန်တကယ်သည်မည်မျှပိုက်ဆံဘယ်လောက်အကြံပြုအပ်ပါသည်, ထို့ကြောင့်အပိုများသည်စနစ်တကျအသိအမှတ်ပြုပြီးသည်နှင့်မကြာမီမကြာမီတွင်အသုံးပြုရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သင့်သည်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာအတွင်းပိုင်း, ဆယ်မိနစ်အပြည့်၌ပြင်ဆင်ထားပြီ.
အလွန်အမင်းပဲ, ဒီအခြေခံအားဖြင့်အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်ပါတယ်, အထိရောက်ဆုံး, အားကစားစာအုပ်များအကြားတွင်လွယ်ကူစွာငွေသွင်းနိုင်သောစနစ်ဖြစ်သည်. အလွန်ဝေးလံသောနေရာများသို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းသည်အလွန်ကောင်းသောစိတ်ထားရှိလူတိုင်းပင်ဖြစ်သည်, နှင့် BookMaker မှာစတင်တဲ့ပိုမိုလွယ်ကူမဖြစ်နိုင်ဘူး.
ထုတ်ယူခြင်း & ငွေပေးချေမှု Times
ဆိုဒ်များအများစုလိုပဲ, BookMaker မှာဖြန့်ဝေခြင်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဒဏ်ငွေ browse ကြောင်းအချို့သောပုံနှိပ်ရှိပါတယ်. ဟုပြောသည်, အနည်းဆုံးအနီရောင်သောတိပ်, ထို့အပြင်သူတို့သည်သင်၏ငွေကိုသေချာစေရန်ရွေးချယ်မှုများစွာကိုပေးသည်.
BookMaker သည်တနင်္ဂနွေနေ့များတွင်ငွေပေးချေမှုတောင်းဆိုမှုများကိုလုပ်ဆောင်သည်. တစ် ဦး က Bitcoin သို့မဟုတ် cryptocurrency ထုတ်ယူနှုန်းလိုအပ်ပါသည်, နှင့်အခြားနည်းစနစ်များအားလုံးကို အသုံးပြု၍ တစ်ခုတည်းသောခွဲထုတ်ခြင်းကိုအပတ်တိုင်းလိုအပ်သည်.
BookMaker ကိုဗဟုသုတဖြန့်ဝေတာဟာပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်ခဲ့တာကြာပြီ. သူတို့ကကျော်အဘို့စစ်ဆင်ရေးအတွက်ပါပြီ 30 နှစ်ပေါင်း, သူတို့ရဲ့အထူးသဖြင့်အသံအတိုးအကျယ်ကြီးမားသည်, ထို့အပြင်သူတို့သည်သင်နှင့်သင်၏ငွေကိုလေးစားစွာဆက်ဆံလိမ့်မည်. သူတို့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုက်နာခြင်းအားဖြင့်, သူတို့ကသူတို့ရဲ့အာမခံချက်နှင့်အတူတက်နေထိုင်ပါလိမ့်မယ်. ဟုတ်တယ်, သင်သည်များစွာသောနည်းစနစ်နှင့်အတူအခကြေးငွေရှာတွေ့လိမ့်မည်, သို့သော်ကမ်းလှမ်းထားသည့်အချက်အလက်အားလုံးကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်းမပြုမီပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး နှင့်စကားပြောခြင်းအားဖြင့်အလွယ်တကူရရှိနိုင်သည်.
ဒါကတကယ်နှစ်ခုပါ 50% လောင်းကစားပွဲအတွက်အားကစားပွဲအတွက်လောင်းကြေးတစ်ခုအပြင်အထူးသဖြင့်ကာစီနိုလောင်းကစားရုံတွင်လောင်းကြေးများအတွက်ဖြစ်သည်. နှစ် ဦး စလုံးဆုကြေးငွေမှာအဖြစ်သို့နေကြသည် $300, ဒါပေမယ့် rollover လိုအပ်ချက်များကိုကွဲပြားပါလိမ့်မယ်. Sportsbook မက်လုံးပေးခြင်းသည်လုပ်ခ ၁၀% စုစုပေါင်းလုပ်အားခလိုအပ်သည်, လောင်းကစားရုံတွင်အပိုဆုကြေးသည်လောင်းကြေး ၄၀ ဆနှင့်အပိုပမာဏလိုအပ်သည်.
အားကစားစာအုပ် 15% ကြိုဆိုပါတယ်
အားကစားစာအုပ်အသစ်ဝယ်သူများသည်ဝင်ငွေရနိုင်သည် 15% သိုက်ပွဲစဉ် $2,500. ဤအပိုသည် 4x ဖြစ်သောအပ်ငွေအလောင်းအစားလိုအပ်ချက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်.
သုံးစွဲသူများသည်၎င်းတို့၏လက်ရှိအကောင့်များကိုပြန်လည်ဖွင့်ခြင်းကပြုလုပ်သည် 10% ဒါမှမဟုတ် 15% တက်အပိုတန်ဖိုးရှိကိုက်ညီ $2,500. အပိုဆုပမာဏနှင့်သတ်မှတ်ချက်များသည်သင်၏ပြန်လည်ဖြည့်သွင်းပမာဏ၏ပမာဏပေါ်တွင်မူတည်သည်. Bookmaker သည်သင့်အားမည်သည့်လွှဲပြောင်းမှုအတွက်မဆိုကုန်ကျစရိတ်ကိုပင်ငွေပြန်အမ်းမည် $300 ဒီအပိုဆု၏ဒြပ်စင်အဖြစ်.
& အပ်ငွေ $50 ဒါမှမဟုတ်အင်္ဂါနေ့ဒါမှမဟုတ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွေမှာဖြစ်မယ် (Neteller သို့မဟုတ် Moneybookers မှတပါးမည်သည့်နည်းလမ်းနှင့်အတူ) နှင့်ဝင်ငွေ 20% သိုက်ပွဲစဉ်သည်သလောက်တန်သလောက်တန်သည် $1,000 ဗုဒ္ဓဟူး. အွန်လိုင်းပြန်တင်ရုံ.
Racebook မြင်း Rebate
အရည်အချင်းပြည့်မီသောပြိုင်ကားမောင်းသူစားသုံးသူများသလောက်လုပ်နိုင်သည် 8% နေ့စဉ်ငွေသားပြန်လာပါ, အနိုင်ရသို့မဟုတ် drop. အွန်လိုင်းဖုန်းဤသည်ဆက်ဆက်သာထူးခြားဆန်းပြားဖြစ်ပါတယ်.
ကာစီနို slot ကအပိုဆု
slot machines ကစားသမားများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီဖြစ်ကြသည် 100% အထိအပိုတန်ဖိုးရှိသိုက်ပွဲစဉ် $500. ဒီအပိုဆုကြေးကိုအချိန်မှန် Chat မှတစ်ဆင့်လိုအပ်ပါသည်. site ၏တကျိပ်နှစ်ပါးသော slot ကဂိမ်းများအတွက်တစ်ခုကိုအသုံးပြုပြီးရုံလောင်းကြေးအပိုရှင်းလင်းရေးဆီသို့ရေတွက်, ဒီဆက်ဆက်က 25x သည်သိုက် - ပေါင်း - အပိုဆု rollover ကြာပါသည်.
မင်းကအရည်အချင်းပြည့်မှီတယ် 100% သိုက်ပွဲစဉ်သည်သလောက်တန်သလောက်တန်သည် $250 သင် Blackjack နှင့် / သို့မဟုတ်ဗီဒီယိုဖဲချပ်ကစားရန်ရည်ရွယ်လျှင်, ဒီအပိုဆုစေသည်. Blackjack နှင့်ရုပ်ရှင် Poker ဂိမ်းများမှလောင်းကြေးများသာအပိုများကိုရှင်းလင်းရန်ရေတွက်ကြသည်, အရာ 40x သောသိုက် - ပေါင်း - အပိုဆု rollover ကြာပါသည်.
ရည်ညွှန်း - a-Friend အပို
အကယ်၍ သင်သည်သူငယ်ချင်းတစ် ဦး ကိုရည်ညွှန်းပါကသူတို့သည်အထူးတောင်းဆိုချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည်. သင်အမှန်တကယ်တန်ဖိုးရှိသည့်အားသာချက်တစ်ခုကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည် 50% ပထမ ဦး ဆုံးသောသိုက်၏ $500. သင်လုပ်နိုင်သောရည်ညွှန်းချက်များ၏ကျယ်ပြန့်သောအတိုင်းအတာတစ်ခုမျှသာမရှိပါ.
အခြားအင်တာနက် ၀ ဘ်ဆိုဒ်များတွင်အခြားရွေးချယ်စရာအကြမ်းဖျင်းဖော်ပြထားသည်, သို့သော် BookMaker ကသူတို့ကိုဆွဲဆောင်မှုရှိသောအလွန်နည်းဖြင့်ပြသသည်. BookMaker သည်ကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်တည်ရှိပြီး၎င်းတို့ကိုစာရင်းမသွင်းနိုင်သောဂိမ်းတစ်ခုရှိလေ့ရှိသည်.
အမျိုးမျိုး၏စည်းကမ်းချက်များ၌, BookMaker တွင်ကျယ်ပြန့်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြင့်လာသည်. သူတို့မှာကစားစရာရေဒါမဟုတ်သည့်ရေဒီယိုနှင့်ဘောလုံးဂိမ်းများရှိသည်, သူတို့ရဲ့အကွာအဝေးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဘောလုံးလိဂ်စျေးကွက်အပေါ်ပိုကောင်းတစ်ခုဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်, သူတို့ရပ်ဂ်ဘီအဘို့အအနာဂတ်ရရှိပါသည်, ခရစ်ကက်, နှင့်မြား (ထင်ရှားတဲ့အပန်းဖြေမှုတွေနဲ့အတူ).
BookMaker ဟာဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ဒီဟာကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအချက်အချာကျပြီးသူတို့စာအုပ်ဆိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူး. တစ်မိနစ်တိုင်းတွင်လိုင်းများကိုချက်ချင်းအဆင့်မြှင့်လေ့ရှိသောကြောင့်ထိတ်လန့်စရာများသို့မဟုတ်မကြာခဏပြန်ဖွင့်လိုခြင်းမရှိချေ.
အနိမ့်ဆုံး BookMaker ဖြစ်သည် $1. လောင်းကစားသမားများကန့်သတ်ခြင်းရှိမရှိလောင်းကစားသမားတော်တော်များများကဂရုမစိုက်ကြဘူး $1,000, $5,000, ဒါမှမဟုတ် $25,000. မည်သို့ပင်ဆိုစေ, ကြီးမားတဲ့ bankrolls ရှိသည်သောလူ (သို့မဟုတ်ပြိုင်ဘက်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှတစ်ဆင့်တစ်စုံတစ်ယောက်သည်အခွင့်အလမ်းရသောအခါကြီးမားကျယ်ပြန့်ရန်စီမံလိုပေမည်. BookMaker သည်အားကစားမှအားကစားတစ်ခုသို့ပြောင်းလဲခြင်းကိုကန့်သတ်ထားသည်, မင်းရနိုင်တယ် $5,000 သို့မဟုတ်ထင်ရှားသောအပန်းဖြေစရာနေရာများဖြစ်သည့်များစွာသောဖြစ်ရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ထပ်မံပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်.
အဆင့်မြင့်ဖြစ်ရပ်များတွင်အကန့်အသတ်များကိုပိုမိုတွေ့နိုင်သည်။ ကျပန်းတင်းနစ်ဝတ်စုံများသည်လုပ်သားများကိုခွင့်ပြုထားသည် $1,000. စနူကာကဲ့သို့စျေးကွက်ရွေးချယ်မှုများ, အပြန်အလှန်ဘော်လီဘော, နှင့် eSports သည်ရာဂဏန်းအနည်းငယ်သာကန့်သတ်ထားသည်.
ကွန်ရက်စာမျက်နှာများစွာသည်ခေတ်မီလောင်းကစားခြင်းကိုပြုလုပ်သည်. BookMaker သည်ရံဖန်ရံခါသူတို့၏တိုက်ရိုက်လှည့်စားမှုများအတွက်သီးဖျော်ရည်များပိုမိုများပြားစေပါသည်, ဒါဟာမကြာခဏစံကြောင်း the-110 ထက်မက.
သူတို့ကဒီဆက်ဆက်အလွယ်တကူရရှိနိုင်၏သေချာပေါက်အထင်ကြီးစရာရွေးချယ်စရာရှိသည်, အမြဲတမ်းကမ်းလှမ်းတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှလှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူ. လျောက်ပတ်သောရွေးချယ်မှုများ - ၎င်းသည်ပြန့်ကျဲနေခြင်းဟုတ်၊ မဟုတ်, ပိုက်ဆံ, သို့မဟုတ် halftime လိုင်း - နိုင်ပါတယ် In- ဂိမ်းတည်ရှိနိုင်သည်. ပြုပြင်ထားသောတိုက်ရိုက်အလောင်းအစားလောင်းကစားစလစ်သည်အမှန်တကယ်တွင်ကုန်ကျစရိတ်အပြောင်းအလဲများကိုလက်ခံရန်ရွေးချယ်စရာများရှိသည်, ကြောင်းအလောင်းအစားအမြန်အလောင်းအစားကိုသက်ဝင်(တစ်ချက်ကလစ်နှိပ်ပါ, နှင့်သင်ရွေးချယ်သည့်မည်သည့်လောင်းကြေးကိုမဆိုကန့်သတ်ထားသည့် max အလောင်းအစားဖြစ်သည်.
ဒါကြောင့်အလှဆုံးသောစာမျက်နှာဖြစ်ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်သော်လည်း, BookMaker ဆယ်လူလာဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ပတ်သက်သောရိုးရှင်းသည့်သဘောသဘာဝသည်အံ့သြစရာဖြစ်သည်.
သင်ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်မှတဆင့် log in အခါ, သင်၏ဘဏ်အကောင့်အရေအတွက်နှင့်ရရှိနိုင်သည့်ငွေသားကိုထိပ်ဆုံးတွင်ဖော်ပြသည်. ရှည်လျားသောစာရင်းတစ်ခုကိုမျက်နှာပြင်အတွက်အလယ်တွင်ဖော်ပြထားသည်. သင်အလောင်းအစားလုပ်လိုသည့်အရာကိုခန့်မှန်းသည့်နေရာတွင်, သို့မဟုတ်သင်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိမဟုတ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအကြောင်းမဲ့ဖြစ်လာ, အပန်းဖြေမှုတစ်ခုစီကို switch တစ်ခုဖြင့်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ ၎င်းသည်အလွန်သေချာသည်. ပိုပြီးအားကစားတစ်ခုရှာဖွေခြင်းသည်ဤသည်သေချာသည်? အောက်ကိုသာချပါ.
သင်၏အပန်းဖြေမှုကိုရွေးချယ်ပြီးသည်နှင့်, အမြန်ဆုံးစတင်ဂိမ်းများကိုပြသလျက်ရှိသည်. သင်ရွေးချယ်သောဂိမ်းကိုရွေး။ လောင်းပါ, မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်နှင့်ဆက်နွယ်နေသောအခြေခံညာဘက်နေရာမှ၎င်းသည်အမှန်ပင်အစိမ်းရောင်ရှိသည်ဟူသောလောင်းကြေးကိုနှိပ်ပါ, အန္တရာယ်သို့မဟုတ်အနိုင်ရဖို့ငွေပမာဏသို့သွားပါ, “ နေရာအလောင်းအစား” ကိုနှိပ်ပါ, အစိမ်းရောင်အတည်ပြုမျက်နှာပြင်ပေါ်လာလိမ့်မည်. mobilen မဟုတ်သော BookMaker ဝဘ်ဆိုက်. အလုပ်လုပ်တယ်, အစာရှောင်, နှင့်ပျော်စရာ.
ဂုဏ်ယူစွာဖြင့် powered WordPress	| အဓိကအကြောင်းအရာ: ဘလော့ဂ်